Buy Smart Solar Power Bank (19,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
ကြည့်သူအရေအတွက်: 310 (+ 1 )
Rocket ရဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မိုးရာသီလဲ ရောက်ရှိလို့နေပါပြီနော်...
အပြင်သွားတဲ့အခါ၊ ခရီသွားတဲ့အခါ၊ လူတိုင်းကိုယ်နဲ့မကွာ ဆောင်ထားတက်ကြတာ ဖုန်းလေးတလုံးပါ။
အချိန်တွေကုန်လာတာနဲ့အမျှ Battery တွေလဲ လျော့နည်းလာတာ သတိထားမိကြမယ်ထင်ပါတယ်?
မိုးရာသီကလည်းဖြစ်၊ power bank ကိုလည်း ရေစိုမှာကကြောက်၊ အိတ်အလေးကြီးတွေကိုလည်း အပြင်ကို မသယ်ချင်ဘူးဆိုရင်
Rocket ရဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် Smart Solar Power Bank လေးနဲ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
water proof (ရေစိုခံ) လည်းဖြစ်လို့ မိုးရာသီမှာ အပြင်သွား၊ ခရီးသွားသူများအတွက် အလွန်ပင် အဆင်ပြေပါတယ်နော်...
Solar စနစ်ပါဝင်သောကြောင့်နေရောင်ခြည်နှင့် တိုက်ရိုက်အားသွင်းနိုင်ပြီး လျပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်သော နေရာများ တောတောင်များနှင့် ဝေးလံခေါင်ဖျားသော နေရာများတွင် သုံးရန် အလွန်ပင်သင့်တော်ပါတယ်
Phone2လုံးကို တပြိုင်နက်အားသွင်းအသုံးပြုနိုင်လို့ မရှိမဖြစ်ကိုဆောင်ထားသင့်ပါတယ်နော်...
-မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရေ 10000 mAh ဖြစ်လို့ ဖုန်းများရဲ့ capacity ကိုကြည့်ပြီး လုံလောက်စွာအားသွင်းနိုင်မှာပါ၊
-USB Port ၂ ခုပါဝင်လို့ device များကိုချိတ်ဆက်အသုံပြုနိုင်ပါတယ်၊
-ဘေးကင်းလုံခြုံသော Li-Polymer ဘက်ထရီနှင့်အတူအိတ်ဆောင် chargerလေးဖြစ်ပါတယ်၊
-လုံခြုံစေရန် သင်ရဲ့ကျောပိုးအိတ်, စက်ဘီး, တွန်းလှည်းမှာ သင်၏နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးခရီးဆောင်
charger ကိုဆွဲထားဖို့ carabiner နှင့်အလှဆင်သံလိုက်အိမ်မြှောင်ထည့်သွင်းထားပါတယ်၊
ဈေးနှုန်း - 19000 Kyats
အမည်: Smart Solar Power Bank